32 ပိုမိုကောင်းမွန်သော (နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်) လေ့လာရန်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြထားသောနည်းလမ်းများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
တာဝန်မှလေ့လာခြင်းသည်ဘဝ၏ပျင်းစရာအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်ပညာရေးစနစ်ကမလိုအပ်သောများပြားလှသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်၊ ၎င်းကိုဖြည့်စွက်ရန်၊ စာမေးပွဲဖြေပြီးသည့်နောက်၎င်းကိုမေ့ပစ်ရန်တစ်နာရီမလိုအပ်ပါ။
သင်လေ့လာမှုကိုလေ့လာရန်နှင့်သင်လေ့လာရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဤအချက်သုံးချက်ကိုမတွေ့မီကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းတစ်စုံကိုတွေ့မြင်မည် youtube ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရှာပြီး၎င်းကိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည် "သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးမည့်လေ့လာမှုစွမ်းရည် ၅ မျိုး".
1 ? လေ့လာဖို့ဘယ်လိုအာရုံစူးစိုက်မလဲ
2 ? ပိုကောင်းလေ့လာဖို့လှည့်ကွက်
2.2 သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏ ဦး နှောက်ကိုအချိန်ပေးပါ။
2.10 Leither စနစ်ကိုသုံးပါ
2.19 flux တစ်ပြည်နယ်သို့ရယူပါ။
2.25 တစ် ဦး grotesque ပုံရိပ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
2.26 ️‍♂️ မလေ့လာမီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
2.27 ? လေ့လာမှုဘာသာရပ်များပြောင်းလဲပါ။
2.28 ? သင်၏လေ့လာမှုကိုသင်သည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်သို့တက်မည့်အလားစီစဉ်ပါ။
2.29 your သင့်လက်ပတ်နာရီကိုချွတ်။ သင့်ရှေ့တွင်ထားပါ။
2.30 ? စာမေးပွဲမတိုင်မီညတွင်လေ့လာခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
2.31 multitask မလုပ်ပါနဲ့
2.32 ? သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အကြံပြုချက်များ
2.33 ? သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုချရေးပါ။
3 ? အကောင်းဆုံးလေ့လာမှုနည်းစနစ်များ
4 ? အစာရှောင်ခြင်းအလွတ်ကျက်ဖို့ဘယ်လို
4.1 ? ပုံပြင်
4.2 ? သင်္ချာ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့မလေ့လာခင်က စီမံကိန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်များကိုလေ့လာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကိုသူတို့စဉ်းစားရန်လိုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ၊ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အတွေးအခေါ်များကိုရောနှောစေသောကြောင့်အသုံးချခြင်းမရှိပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် လေ့လာမှုဇယားနေသမျှကာလပတ်လုံးကလက်တွေ့ကျကျအဖြစ်။ စာကိုသင်မလိုက်ဘူးဆိုရင်အရေးမကြီးဘူး။ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းကြာအောင်ယူမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါတောင်မှအချိန်ဇယားဆွဲတာဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။
ကျွမ်းကျင်သူများကမူ၎င်းသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်ဟုယူဆသည် သင့်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးသောအကြောင်းအရာများနှင့်စတင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကသူတို့ကိုအရင်လေ့လာပြီးအဲဒါကသင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်ခက်ခဲသောအရာများနှင့်စတင်လိုပါကလမ်းသည်ကုန်းဆင်းပြီး ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိလိမ့်မည်။ ဤတွင်သင်ကသင့်လျော်ဆုံးအဖြစ်လျှောက်ထားသင့်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ အတန်းထဲတွင်မှတ်စုများယူပါဆရာသည် 'အရေးကြီးသည်' သို့မဟုတ် 'ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်' ဆိုသည့်အချက်ကိုသင်အလေးအနက်ပြုရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနေရာမှစာမေးပွဲမေးခွန်းအသစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ဒါဟာထိန်းသိမ်းထားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ် ကောင်းသောအာဟာရ ကျွန်တော်စာမေးပွဲရာသီ၌ရှိကြ၏အခါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ဦး နှောက်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တွေ၊ ငါး၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။
အလွန်များပြားသောအစားအစာများအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ဒါဟာထိုင်ဖို့နဲ့လေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့ကိုကြိမ်နည်းနည်းနဲ့စားတာကအကောင်းဆုံး။
သင်လေ့လာစရာအများကြီးရှိရင်တောင် အနားယူရန်အရေးကြီးသည်။ အိပ်ရာမဝင်မီရေပူကိုယူပါ။ ၎င်းသည်အနားယူရန်နှင့်ကောင်းသောညအိပ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
တစ်နာရီ၊ နာရီတိုင်းနှင့်တစ်ဝက်စီလေ့လာလျှင် ၇ နာရီခန့်အနားယူနိုင်သည်။
အရာအားလုံးကိုနောက်ဆုံးနေ့အတွက်ဘယ်တော့မှမထားခဲ့ပါနှင့်။ သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းသင်အနည်းငယ်လေ့လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့သွားပြီးဝါသနာပါရာတွေကိုအချိန်ပိုပေးနိုင်မှာပါ။
အမြဲတမ်းရွေးချယ်ပါ လေ့လာရန်နေရာတစ်နေရာ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဆူညံသံမများဘဲလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ရန်သတိရပါ။ သင်ထိုင်မလေ့လာမီသင်အံမှုအတွက်လိုအပ်သည့်အရာများကိုစုဆောင်းပါ။ ရေတစ်ခွက်သို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များပါဝင်သည်။
ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့်အဆင့်များ၊ လုံလောက်သောလေ့လာမှုမပြုခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်တကျအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၏ရလဒ်များကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အချို့ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်သည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ။
ဒီမှာငါဒါတွေကိုထားခဲ့တယ် လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်း ၃၂ ခုကိုသင်ပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်စာမေးပွဲများတွင်အဆင့်ပိုကောင်းလိုပါကလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
သင့်ကိုနားထောင်ရန် guinea pig လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မိဘ၊ သင်၏အစ်ကိုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ယခုလေ့လာခဲ့သောအရာကိုရှင်းပြပါ။ သို့သော်ယင်းကိုမဖြေရှင်းပါနှင့်။ အခြားတစ်ခုမှာသိလိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရှင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ရမည်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏ ဦး နှောက်ကိုအချိန်ပေးပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သင်ယူခြင်း၊ စာအုပ်တစ်ခုမှသို့မဟုတ်ကွန်ဖရင့်၌လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ၂၄ နာရီအတွင်းထိုအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်မေ့လျော့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် အချက်အလက်များ၏ 80% အထိ။
တစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်စုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါက ၅ မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များ၏ ၁၀၀% ကိုသိမ်းထားမည်။ အညွှန်း
ကောင်းမွန်စွာလေ့လာခြင်းသည်သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်သင်လေ့လာနေသောအရာများကို extrapolating လုပ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ကျသောအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အဖြစ်မှန်သို့ရောက်စေရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောအရာများနှင့် ပို၍ စိတ္တဇဆန်သောအရာများရှိလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးကိုလှည့်ပါ။ လက်တွေ့ကျတဲ့အသုံးဝင်မှုကိုရှာဖွေတာကသင့်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာဗဟုသုတကိုပိုမိုခိုင်မာစေမှာပါ။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများကအာမခံ လေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့အချိန်မရှိရင်ကော။ San Diego မှစိတ်ပညာရှင်အုပ်စုတစ်စုကလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များအတွက်သင်ယူခြင်းကိုချန်ထားခြင်းသည်မှားသည်ဟုဆိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ပတ်အတွင်းစာမေးပွဲရှိလျှင်၊ အနည်းဆုံး ၅ ရက်ကျန်သည့်အချိန်တွင်စတင်လေ့လာပါ။
အင်တာနက်ကိုသင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည်မှာသင်လေ့လာနေသည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသင့် ဦး နှောက်ကပိုမိုလွယ်ကူစွာသိမ်းသွင်းနိုင်ရန်အချက်အလက်များကိုအသံဖြင့်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါ။ YouTube ၌သင်လေ့လာလိုသည့်အရာသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖန်တီးလိုသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗွီဒီယိုများကိုရှာပါ။ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ အာရုံမပျံ့လွင့်ပါစေနဲ့။
၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာပါမောက္ခတစ် ဦး သည်စပ်စုသောလေ့လာမှုတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင်လေ့လာသောအရာကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်သင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူခြင်းသည်နှလုံးသားသဘောတရားများကိုသင်ယူခြင်းထက်သင်ပိုမိုလေ့လာကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်သင်ခန်းစာကိုဖတ်ရန်၊ စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိနိုင်သည့်အရာကိုရွတ်ဆိုရန်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ထားသည့်အတိုင်းအမြဲတမ်းဖတ်ရန်အကြံပြုသည်။ အညွှန်း
ဤလှည့်ကွက်သည်အလွန်အရေးကြီးပြီးသင်လေ့လာမှုကိုခက်ခဲစေရန်နှင့်သင်ပိုမိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်လိုသည့်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေလိမ့်မည်၊ ထိုအချိန်ကာလပြီးနောက်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်သိုထားသည့်လက်ဆောင်ကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်ကိုသိသောကြောင့် ကောင်းစွာလေ့လာနိုင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်။
တက်ဘလက်များနှင့် eReader များကိုစျေးကွက်၌ချမှတ်ခြင်းရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းတို့သည်လေ့လာရန်မသင့်တော်သောအချက်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရအိုင်ပက်ဒ်သည်ပုံနှိပ်ထားသောစာအုပ်ထက်စာလျှင် ၆.၂% အထိစာဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုကြာမြင့်စေသည် (Kindle နှင့်အတူ ၁၀.၇% ပိုမိုကြာသည်) ။
ထို့အပြင်အင်္ဂလန်ရှိ Leicester တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာပါမောက္ခ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရကျောင်းသားများသည်သင်ခန်းစာကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ထက်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်အကြိမ်များစွာဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အညွှန်း
ဦး စားပေး၊ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများသည်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါ။ အခက်ခဲဆုံးနှင့်အမြဲတမ်းစတင်ပါ။
ဒီစနစ်မှာကတ်ပြားတွေပါဝင်ပြီးလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးလိမ့်မယ်။ ကျောင်းသားသည်၎င်းတို့အားဖြေဆိုရပါလိမ့်မည်။ မမှန်မကန်ဖြေဆိုသူများအားမတူညီသောပုံတွင်ခွဲခြားလိမ့်မည်။
မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်သင်မလေ့လာမီ ၅ မိနစ်ကြိုတင်ထားပါ။ သင်လေ့လာမည့်အရာ၊ သင်ယူမှုကိုမည်သို့တည်ဆောက်ပုံ၊ အာရုံစိုက်ပါ၊ ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုစတင်စဉ်းစားပါ။
လေ့လာခြင်းမပြုမီအာရုံစူးစိုက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လေ့လာခြင်းမပြုမီဤ ၅ မိနစ်သည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သင် ၁၀ ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်ရရှိမည့်ချီးကျူးစရာများကိုသင်မည်မျှစိတ်ကျေနပ်မည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
လေ့လာမှုမှဘာသာရပ်မှသင်၏စိတ်ကိုဖယ်ရှားရန်၊ ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဗဟုသုတကိုယ်နှိုက်ကမည်သို့ခိုင်မာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။
သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး၌အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအယူအဆသည်သင့်အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရမယ်။ ထိုအယူအဆ၏ရလဒ်အဖြစ်အခြားအရာအားလုံး၊ ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်။
စတန်းဖို့ဒ်ဆေးပညာကျောင်းမှသုတေသီများကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုအချို့ရှိသည် (ဥပမာ - အချို့သောဂီတအမျိုးအစားများကိုနားထောင်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဂန္ထဝင်) ဦး နှောက်၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုတိုးတက်စေသည်။
တချို့ကမနက်မှာပိုကောင်းတယ်၊ တချို့ကအစာစားတယ်၊ တချို့ကညဘက်မှာပိုကောင်းတယ်၊ တချို့ကတော့နံနက်ယံမှာပိုကောင်းတယ်၊ တချို့ကညဘက်မှာပိုကောင်းတယ်။
တစ်ညလုံးလေ့လာခြင်းသည်လေ့လာခြင်းအတွက်မကောင်းပါ။ Notre Dame တက္ကသိုလ်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ကျောင်းသားအုပ်စုနှစ်စုပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ကနံနက် ၉ နာရီတွင်လေ့လာပြီးနောက်တစ် ဦး ကည ၉ နာရီတွင်လေ့လာခဲ့သည်
လေ့လာမှုတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်အောင်မြင်မှု (သို့) ရှုံးနိမ့်မှုအကြားခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေသောသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အညွှန်း
စိတ်ဖိစီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်မကောင်းပါ။ မကြာခဏဆိုသလိုနာရီအနည်းငယ်နားပြီးအနားယူရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချပါကပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလွတ်ကျက်ပါလိမ့်မည်။ အညွှန်း
သေချာတာပေါ့တစ်ယောက်တည်းပညာကောင်းကောင်းတတ်တဲ့လူတွေပေါ့။ အကယ်၍ ဤကိစ္စသည်သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်အားဤအကြံဥာဏ်ဖြင့်နားမထောင်ပါနှင့်။ သို့သော်၊ တူညီသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးသင်နှင့်အတူတူပင်လေ့လာနေသောလူများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဝန်းရံထားခြင်းသည်ကောင်း၏။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူညီပြီးလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်။
များသောအားဖြင့်လေ့လာမှုနည်းစနစ်များသည်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအမြဲတမ်းအလုပ်မဖြစ်ပါ။ ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားသည်။ လေ့လာမှုနည်းလမ်းသည်တိုးတက်လာသည်။ ကျောင်းသားသည်သူနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ရွေးချယ်ရမည်။
ဒီပြည်နယ်ထဲဝင်ရန်ခက်ခဲသည် သိကောင်းစရာနံပါတ် ၆ ကသင့်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောစစ်ဆေးမှုများကိုခံယူပြီးအသိပညာကိုကြာရှည်စွာမှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်။ အညွှန်း
စိတ္တဇအချက်အလက်များကိုပုံတစ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းရန်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အယူအဆတစ်ခုကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါက၊ အမြင်အာရုံသည်စတင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မိုက်မဲဟန်ရှိသော်လည်း၊ များစွာသောလေ့လာမှုများ (ဥပမာ၊ ၁၉၉၆ တွင် Halpern မှ ၁၉၈၇ တွင် Carr, Borkowski နှင့် Presley၊ ၁၉၉၀ တွင် Garner တို့က) ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်သင်ယူမှု၏ကွေးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ရည်မှန်းချက်မှာအပျက်သဘောအတွေးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအတွေးများကိုတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကသာကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံမှတားဆီးလိမ့်မယ်။ ကိုးကားစရာ
ဒါဟာထူးခြားတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ။ ဥပမာ - သင်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဒြပ်စင်များကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပါကအတိုကောက်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ လီသီယမ်၊ ကာဗွန်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ အောက်စီဂျင်၊ နီယွန်၊
လေ့လာသောအခါအနည်းဆုံးသောဒြပ်စင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတိုင်းအတာကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ ဥပမာအခန်းတစ်ခန်းပြောင်းလဲခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ အညွှန်း
တစ် ဦး grotesque ပုံရိပ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်လျင်မြန်စွာပြုလုပ်လိုပါက၎င်းသည်လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည်။ အခြေခံအယူအဆကတော့စိတ်ကူးသုံးခု၊ လေးခုကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ပြီးသုံးခု၊ လေးလုံးစလုံးပါ ၀ င်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံသဏ္formingာန်ကိုဖွဲ့တယ်။
ပန်းသီး၊ နို့နှင့်ပဲများပါ ၀ င်သည့်စျေး ၀ ယ်စာရင်းကိုအလွတ်ကျက်ထားပါကသင်၏ပန်းတိုင်မှာ၎င်းပစ္စည်းများပါဝင်သည့်ပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - နွားနို့ကိုနို့တိုက်ကျွေးနေသောမျက်လုံးများနှင့်ခြေထောက်များရှိပန်းသီးကြီးတစ်လုံးသည်နို့ကိုပဲနှင့်အတူပန်းကန်ထဲသို့ကျသည်။
အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်မှ Dr. Dougals B. Mckeag ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရအားကစားပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိသွေးကိုပိုမိုပျံ့နှံ့စေသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသင်ယူနိုင်လိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းတူညီသောလေ့လာခြင်းသည်ပျင်းစရာကောင်းပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေါဟာရကိုလေ့လာနေလျှင်စာဖတ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်္ချာပညာကိုလေ့လာပြီးစာပေစာမေးပွဲရှိပါက ဦး နှောက်ကိုယ်တိုင်လန်းဆန်းစေရန်ကွဲပြားခြားနားရန်အဆင်ပြေသည်။
အစီအစဉ်တစ်ခုကိုယူပြီးပန်းတိုင်ငယ်များကိုထားရှိပါ (စခန်းများ) ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်စခန်းကိုရောက်ရတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
your သင့်လက်ပတ်နာရီကိုချွတ်။ သင့်ရှေ့တွင်ထားပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာချိန်ကို ၄၅ မိနစ်စီသတ်မှတ်ထားရမည်။ နာရီသည်ဤအချိန်ကိုမှတ်သားရန်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
စာမေးပွဲမတိုင်မီညနေခင်းလေ့လာချိန်များသည်ကောင်းသည်ထက်မကောင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည်အဆင့်နိမ့်သောအဆင့်၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းတို့နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည် တစ်ညတည်းလေ့လာမှုသည် ဦး နှောက်ကိုလေးရက်အထိဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
multitasking သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုနည်းစေပြီးအာရုံပျံ့လွင့်စေသည်။1]   Multitasking လုပ်တာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတောင်မှသာမန်လူတွေထက်ပိုမကောင်းဘူးဆိုတာလေ့လာမှုတွေကပြနေပါတယ်။
ထိရောက်သောကျောင်းသားများသည်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ WhatsApp တွေဖြေတဲ့အခါ၊ တီဗွီကြည့်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်သင့် Twitter အကောင့်ကိုကြည့်နေတာမျိုးလေ့လာဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။
ငါဒီစာမေးပွဲကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မလား။ အဓိကသော့ချက်များနှင့်ညီမျှခြင်းများကိုငါမေ့သွားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ စာမေးပွဲသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ ခက်ခဲလျှင်ကော။
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ1] ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများသည် ၁၀ မိနစ်အတွင်းစာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ခံစားချက်များအကြောင်းရေးသားခဲ့ကြသောကျောင်းသားများသည်မလုပ်ခဲ့သောကျောင်းသားများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုတေသီများကဤနည်းသည်ပုံမှန်စိုးရိမ်ပူပန်နေသောကျောင်းသားများအတွက်အထူးထိရောက်သည်ဟုဆိုကြသည်။
မှတ်စုများနှင့်အကျဉ်းချုပ်များကိုလက်ဖြင့်ရေးပါ - ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ပုံရသော်လည်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၎င်းသည်အရေးပါမှုမရှိတော့ပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန် (သို့) မှတ်စုများကိုရယူရန်အတွက်နည်းပညာများ၊ ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များရှိသည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ၎င်းတို့အားသင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ရေးဖြင့်ရေးသားရန်အမြဲအကြံပြုသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရေးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကစာဖတ်နေတယ်၊ ဆိုလိုသည်မှာအရေးကြီးသည်ကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းရန်သင်စီမံနိုင်သည်။
အရာအားလုံးကိုမကြာခဏမလေ့လာပါနှင့်ဖြေ - အရင်တုန်းကဖွဲ့စည်းထားတာပိုကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များအတွက်အရာရာကိုထားခဲ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနာရီများစွာအတန်းလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီမဟုတ်ပါ၊ လေ့လာမှုအားလုံးကိုအချိန်တိုအတွင်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသောကြောင့်မကောင်းပါ။ နာရီအနည်းငယ်ကုန်သွားအောင်၊ အနားယူပြီးရင်ဆက်လေ့လာတာကအကောင်းဆုံး။ ထို့ကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်။
အကွောငျးရငျး အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုံ့ဆော်ပေးရပါမည်၊ သို့မှသာဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။
စိတ်ကူးများအသင်းဖြေ - ဒါဟာလေ့လာသိရှိထားတာတွေကိုစည်းရုံးတဲ့နည်းလမ်းပဲ။ သင်သော့ချက်စာလုံးများသို့မဟုတ်သဘောတရားများကိုဆက်စပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များဖြစ်ကြောင်းသော့ချက်စာလုံးများကိုသုံးနိုင်သည်။
စာသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်လေးလွန်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များ ယင်း၏။ ယခင်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဆင်တူသည့်အယူအဆတစ်ခု၊ ဓာတ်ပုံများမှစတင်သောစာသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
ထပ်ခါထပ်ခါဖတ်ပါ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူညီတဲ့အယူအဆကိုအမြဲတမ်းထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိနေမှာပါ။ အသံကျယ်စွာလေ့လာရန်ရွေးချယ်သူများမှာရလဒ်တူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုလေ့လာရန်ထိုင်သောအခါ၎င်းကိုအကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဖတ်ရှုခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူ့ထံမှ, ငါတို့မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် အဓိကအတွေးအခေါ်များ နှင့်နိဂုံးချုပ်။ ဒီမှစ။ , ငါတို့ပုံဆွဲအသေးစိတ်သို့မဟုတ်အကျဉ်းချုပ်စေနိုင်သည်။
စာမေးပွဲများနှင့်လေ့ကျင့်ပါဖြေ - အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာတွေအားလုံးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုထင်ဟပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အလားတူစာမေးပွဲပုံစံနှင့်အတူထက်ထိုသို့ပြုမှပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်း။
စာဖတ်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ရာ၏ ၁၀% သည်သင်သိရှိရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲက ၅၀% နီးပါးသည်စကားစမြည်ပြောဆိုမှုများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများနှင့်ဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ပြောတာတွေက ၇၅% ဟာလေ့ကျင့်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီတော့ဒီအချက်အလက်တွေရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်တယ် မြန်မြန်မှတ်သားပါ.
ကျနော်တို့လေ့လာရန်စာသား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်နှင့် အသံကျယ်ကျယ်ပြောပါမယ်။ ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်မှပထမဆုံးစာဖတ်ခြင်းအထိဖြစ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့်အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်းကအဲဒါကိုဖမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်သင်ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးသင့်ကိုယ်သင်ထပ်ခါထပ်ခါနားထောင်နိုင်သည်။
သင်နှင့်အတူမနေတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိတဲ့အခါ, အကျဉ်းချုပ်လုပ်ပါ သင့်ရဲ့လက်ရေး၌တည်၏။ အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီကိုဖတ်။ အဓိကအတွေးအခေါ်နှစ်စုံကိုရယူပါ။
ယခုအလွတ်ကျက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလဲ?, အသံကျယ်ကျယ်နဲ့စာသားကိုကြည့်စရာမလိုဘဲပြန်လည်လေ့လာခြင်း။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုရန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောနေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ၎င်းကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျစေရန်သင်မှန်ရှေ့တွင်ရပ်။ သင်ခန်းစာပြောပြနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အယူအဆများကိုမပြင်ဆင်ဘဲနှင့်သင်သည်နောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်သို့မသွားသင့်ကြောင်းသတိရပါ။
ခေါင်းစဉ်များကိုအလွတ်ကျက်ထားပါကခဏအနားယူပါ။ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ၊ အနားယူပါ ထို့နောက်အနည်းငယ်လျော့ရဲသောအရာများကိုပြန်စဉ်းစားပြီးပြန်သွားပါ သုံးသပ်ချက်ပေးပါ။ သငျသညျကောင်းစွာသဘောတရားများကို fix ဖို့ရှိသည်!
သင့်ကိုယ်ပိုင် mnemonic နည်းစနစ်များကိုရွေးချယ်ပါဖြေ - ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာသင်္ချာနဲ့ရူပဗေဒဆိုင်ရာဖော်မြူလာတွေမတိုင်ခင်မှာသူတို့ကိုမှတ်မိဖို့အတွက်နည်းဗျူဟာအချို့ကိုတည်ဆောက်ရမယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖော်မြူလာ၏အက္ခရာတစ်ခုစီသည်ဘုံနာမည်တစ်ခု၏ပထမဆုံးစာလုံးဖြစ်နိုင်ပြီးအက္ခရာများ၏ပေါင်းလဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစကားစုတစ်ခုထားခဲ့သည်။ အကယ်စင်စစ်ထိုနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်သင့်ကိုမှတ်မိရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
Visual သဲလွန်စစကားစုတွေဟာမင်းရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ အမြင်အာရုံတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်။ သင်အမြဲကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ အခန်းတစ်ခန်း၊ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံသေနည်းထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်အက္ခရာများရေတွက်ပါလိမ့်မယ်။ အက္ခရာတစ်ခုစီသည်ရွေးချယ်ထားသောမြင်ကွင်းတွင်ရှိသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖော်မြူလာများကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတာသံသယမရှိဘဲအမြဲတမ်းကျင့်သုံးရမယ်။ တူညီတဲ့ပုံသေနည်းဘယ်မှာရှိပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းကြိုးစားပါ။
ဖော်မြူလာ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဖြိုဖျက်ဖြေ - ရှုပ်ထွေးတဲ့ဖော်မြူလာတစ်ခုကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်နည်းနည်းယူရမယ်၊ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ထိရောက်မှုရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံပုံသေနည်းကိုယ်နှိုက်ကိုလေ့လာခြင်းသည်အသုံးမဝင်ပါ။ အပိုင်းတစ်ခုစီကိုဖြိုခွဲခြင်း၊ ဘာကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းနှင့်သင်ရှာဖွေနေသည်များကိုသိခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအလွတ်ကျက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လေ့လာရန်အတွက်အကြံပေးချက်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လေ့လာပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ပညာရေး » ပိုမိုကောင်းသော (နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်) လေ့လာရန်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြချက်လှည့်ကွက် 32
Clodo ကို Cote ဟုသူကပြောသည်
ငါအိုင်တီထဲသို့ PRACTICE ထဲသို့ထည့်ချင်သည်
Clodo C Cote သို့ပြန်သွားပါ
ဖိုရမ်များနှင့်စသည်တို့၌ အဲဒါကိုစာလုံးအသေးနဲ့ရေးထားတယ်။ အကယ်၍ သင်စာလုံးကြီးများဖြင့်ရေးပါကသင်သည်အော်ဟစ်ခြင်းနှင့်ရိုင်းစိုင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Corrector Corrector ဟုသူကပြောသည်
အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ဝါကျများသည်စာလုံးအကြီးဖြင့်စတင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် "Corrector" ကိုလုပ်လိုလျှင်စာရေးသားခြင်းနှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်အမှားများမပါရှိပါက ဦး စွာစစ်ဆေးပါ။
ဒါ့အပြင်သင်က "ဖိုရမ်များနှင့် etc" ဟုပြောသည်။ ဒါကမကောင်းဘူး၊ သင်ကော်မာ (,) လိုချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်စာလုံးတစ်လုံးပျောက်နေတာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Corrector Corrector သို့ပြန်ကြားပါ
မင်းစာလုံးပေါင်းအမှတ်အသားကို "စာလုံးပေါင်း" တွင်ထည့်သွင်းခြင်းကိုသင်လက်လွတ်ခဲ့သည်။
Clara မာရီယာ Villalba ဟုသူကပြောသည်
clara maria villalba အားစာပြန်ပါ
ဒါကိုရေးပြီး * ငါအာရုံပျံ့လွင့်သွားတယ်
အထီးကျန်ကြယ်ပွင့် Arranz de la hoz Barra ဟုသူကပြောသည်
အထီးကျန်ကြယ်ပွင့် Arranz de la hoz Barra ကိုပြန်ပြောပါ
ကလော်ဒီယာ Melanie Romani Herrera ဟုသူကပြောသည်
Claudia Melanie Romani Herrera အားပြန်ပြောပါ
မကောင်းဘူးမဟုတ်ပါ၊ လှည့်ကွက် ၁၀ ခုထဲမှာငါနဲ့တခြားသူတွေကိုတခြားအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မကူညီပေးတဲ့လှည့်ကွက်တွေရှိတယ်။ ငါလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပြသနာတွေရှိတယ်၊ အထက်တန်းကျောင်းကအရမ်းရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအားဖြည့်ပေးတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငါသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အကြံပြုတယ် 😉
စာအုပ်မရှိဘဲလျင်မြန်စွာလေ့လာခြင်းဖြစ်သော်လည်းစာအုပ်နှင့်ပိုကောင်းမည်မဟုတ်သောကြောင့်စာအုပ်သည်ကွန်ပျူတာထက်ပိုကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရှိသော်လည်းကလေးအချို့ရှိပါသည်။ ကွန်ပျူတာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း၊ အကယ်၍ သင်မသွားလိုလျှင်ကျွန်ုပ်သွားပါမည်။ သင်၏ကျောင်းစာကြည့်တိုက်နှင့်စာမေးပွဲအတွက်စာအုပ်တိုတောင်းပါ
Ariel C ဟုသူကပြောသည်
ဤအချက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်စဉ်းစားခြင်းသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရပြီးအချို့သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာများ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ညအချိန်တွင်လူတိုင်းအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်လေ့လာသည်နှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်မည်သည့်အရာသည်မဆိုဂီတ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခွင့်မပြုသည့်ဤအရာများမှတိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းကသင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ငါတစ်စုံတစ်ယောက်အားကျွန်ုပ်လေ့လာသင်ယူကြောင်းအတည်ပြုရန်သင်ခန်းစာတစ်ခုသင်ကြားသည်။ အခြားဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်ပြန်လာတဲ့သူတွေကိုရှာပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ !!!!
ARIEL C ကိုစာပြန်ပါ
Karina LONGORIA ဟုသူကပြောသည်
IT သည်အလုပ်မလုပ်ပါကသတင်းအချက်အလက်များကိုမိမိကိုယ်ကိုအနိုင်ယူရန် ပို၍ ကောင်းသည်
KARINA LONGORIA သို့ပြန်သွားပါ
ဘောလုံးကိုမချိုးပါနဲ့ !! ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်း၌မဟုတ်၊ စာလုံးပေါင်းအလုပ်များမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးသည့်အချိန်တွင်မဟုတ်ပါ
Gypsy ဒologistနပညာရှင် ဟုသူကပြောသည်
Gypsy Philologist သို့ပြန်သွားပါ
သတိထားပါ၊ အမှားတစ်ခုသည် tilde ကိုရည်ညွှန်းရန်“ accent” ဟူသောစကားလုံးကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ သတိရကြပါစို့, "အားလုံးစကားလုံးများကိုအသံထွက်ရှိသည်", သို့သော်, "အားလုံးအားလုံးအသံထွက်ရှိသည်"; ပြီးတော့ခင်ဗျားရေးခဲ့တဲ့ဒီမျဉ်းကြောင်းနှစ်ခုမှာကျွန်တော်နားလည်နိုင်တာက“ ဂရပ်ဖစ်ဝဲသူ့ဟာသူ၊ ဆိုလိုသည်မှာ accent” ကိုဆိုလိုတာလား။ ဥပမာအားဖြင့် -“ CARA” - ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆထားသည့်“ ca” စကားလုံး၏အသံထွက်ကိုရရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသံထွက်အားဖြင့်သရအက္ခရာဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသောကြောင့်အသံထွက်မပါရှိပေ။ ဒါကြောင့်သတိထားပါ စကားမစပ်… UPPER CASE မှာရေးတဲ့အခါမင်းကအော်ဟစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်္ကေတပြပေမယ့်“ နောက်တစ်ခုကိုမသိဘဲဘယ်တော့မှအိပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး”;) ။
အဆိုပါဝဲနှင့်ဝဲအတူတူပါပဲ။ : v
အဲရီကာ :) ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… !!! ငါဘာတွေဖြစ်နေလဲ try အကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်
erika သို့ပြန်သွားရန် :)
ဒါကိုရပ်တန့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အတန်းများကိုစိတ်ထဲမထားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်လည်းအတန်းများကိုမရှင်းပြနိုင်ပါ။ စာသင်ခန်းများကိုမည်သို့ရှင်းပြရမည်ကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းအချို့လိုအပ်ပါသည်။ ,,
အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ ဘုရားသခင့်မျက်နှာကို ထောက်၍ လူတိုင်းကသူတို့လိုချင်သည့်အတိုင်း (proofreader) ရေးသည်။ ဤအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်အားများစွာအထောက်အကူပြုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်နားလည်သဘောပေါက်ပါက၊ ယခုသင်နားလည်မှုမရှိပါက၊ ၎င်းသည်အခြားအရာတစ်ခု၊ ကျောင်းသို့သွားပါ၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင့်အားဝေဖန်ရန်မသင်ခဲ့သည့်သင်မြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ????
ကြည့်ရတာအရမ်းလေးလွန်းတယ်၊ သင်ဟာတကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့်ငြီးငွေ့စရာတွေဖြစ်နေတဲ့မှတ်ချက်တွေအားလုံး ...
သူကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကပိုများတယ်၊ အဲဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးကျေးဇူးတင်ပါ။
Zaidi MID ဟုသူကပြောသည်
Zaidi MED သို့စာပြန်ပါ
သတင်းအချက်အလက်နည်းနည်းလေးနဲ့အတူမှော်ကျည်ဆန်မရှိသေးဘူး။ ဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုသင်ကုန်ကျတယ်လို့ထင်ရတာလဲ။ သငျသညျယခုအချိန်အထိအဘယ်ဖြေရှင်းချက်ကြိုးစားခဲ့ပြီနည်း သင်ဘာလိုသည်ဟုထင်ပါသလဲ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါသိပ်မသုံးပါဘူး ငါအင်္ဂလိပ်စာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးလေ့လာနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏နေ့နှင့်နေ့များကိုမည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး အားရှင်းပြပါက၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာကိုနားမလည်ပါ။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးဖြစ်ပါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
ငါသည်လည်းအင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ကာယပညာကိုသင်ကြားသည်၊ သို့သော်လွယ်ကူသည်၊ သင်သည်မူလတန်းကျောင်း မှစ၍ အခြေခံဝေါဟာရများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ခုန်, ပြေးသကဲ့သို့ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်ဝေါဟာရပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်လိမ့်မည်။
အန်တိုနီယိုသည် YouTube ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများကြည့်သည့်အခါရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်သင် can သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်
ဒီမှတ်ချက်ကိုလျစ်လျူရှုပါ၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်မိုက်မဲသော ... XD
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်“ ကြွေးကြော်သံ” (စင်ကြယ်သောစာလုံးများ) တွင်လူအမြောက်အများရှိနေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိရောက်မြန်ဆန်သောအရာတစ်ခုခုလိုအပ်သည်၊ ပြစ်မှုမရှိဘဲစာဖတ်တတ်အောင်များများရေးသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သူတို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာသူတို့သိကြပါသလား။ ကျွန်ုပ်တွင်ကောင်းမွန်သောစာလုံးပေါင်းရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြသသည်။ ) ဒီနည်းပညာသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
("စင်ကြယ်သောစာလုံးအက္ခရာများ") စာလုံးပေါင်း stella ကိုမသိဘူးဟုသင်မည်သူပြောသနည်း။ 🙂
လှုံ့ဆော်မှုသည် LaWea ပြောသကဲ့သို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိရန်သင်၏တစ်နေ့တာအတွက်ကြိုးစားပါ။ သင်တို့ထဲမှအချို့သည်တက္ကသိုလ် ၀ င်ရန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်ရာအချို့က၎င်းကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်။
ယခင်အတွက်၊ သင်ယခုလေ့လာရန်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သင်မနက်ဖြန်သင် / လေ့လာလိုသည့်အရာအပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးသင့်ကိုမြင်ယောင်စေသည်။ အမှန်မှာအချို့သောအကြောင်းအရာများသည်သင်သူတို့ကိုမနှစ်သက်သောကြောင့်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်နေပုံရသည်၊ သင်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။
အလုပ်မှာရှိပြီးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသင့်သည်။ ငါပြောသင့်သည်၊ ယင်းသည်သူတို့၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာမဟုတ်သကဲ့သို့ဘာမျှဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်သည်၊ ပြုပြင်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ပြိုင်ပွဲထိ မိ၍ လဲပြီးအဆုံးသတ်ခြင်းထက်သင်၏ဘ ၀ တွင်အချိန်များစွာပေးအပ်ထားသည့်အရာများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအပ်နှံဘဲထားခြင်းထက်တတိယတန်းတွင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
မည်သူမဆိုမနက်ဖြန်ဘာလေ့လာရမည်နည်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုလေ့လာရန်မည်သည့်အဆင့်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏သင်တန်းကိုပြောင်းလဲပြီးအခြားရွေးချယ်လိုလျှင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနယ်ပယ်ကိုအာရုံစိုက်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းတို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှု၊
ငါမိန်းကလေးတချို့လိုချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်မရဲ့လေ့လာမှုအတွက်သင်ပုန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နိုင်တယ် !! ဒါနဲ့ခန္ဓာဗေဒအကြောင်းပိုလေ့လာမယ် ..
ငါသိပ်မဆိုးတာကိုငါတွေ့ပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြီးကြီးမားမားဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဒါပေမယ့်ငါဘာလုပ်မလဲမသိဘူး။
Concept မြေပုံများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံး၏အကျဉ်းချုပ်ကိုပြုလုပ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူ concept map များကိုပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်ငါရေးသားခဲ့ရာများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။ မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါသိနှင့်ပြီးသားအချို့ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါလိုချင်တာအတွက်အသုံးမဝင်ဘူး၊ စပိန်နိုင်ငံကိုလေ့လာဖို့လှည့်ကွက်တွေကိုမင်းသိရင်မင်းငါ့ကိုပြောပြပါလား။
အရူးကဒီဟာအများကြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ermano ကိုမသုံးတဲ့စာလုံးပေါင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ လေ့လာပါ
ppepe, သင်စာလုံးပေါင်းသင်ယူသင့်တယ်။ : v
၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားအရာများအကြောင်းပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါ။ ဤတွင်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ယောက်ျားလေးများ (သို့) မိန်းကလေးများလား။ ထိုအခါငါကငါ့သမီးများအတွက်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာတွေ့ကြောင့်စာမေးပွဲများအတွက်သူမ၏အများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၎င်းသည် brute ထက်မွန်ဂိုလီးယားထက်ပို။ ၎င်းကိုမသုံးပါ
တရားမျှတမှု 23 ဟုသူကပြောသည်
Sergio Garcia Carrillo နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ချစ်သူ, သင်၏သမီးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်သင်သိ, ငါသင်၏မျက်နှာကိုမှမပြောတတ်ကြောင်းသိလျှင်, သင်ငါ့ကို guapi 655765552 ပိုကောင်းတဲ့သူကိုသင့်သမီးထံနမ်း။
Sergio Garcia Carrillo ကိုပြန်သွားပါ
ဆာဂျီယို Garcia Carrillo ကကျွန်တော့်စက်ရုပ်ကိုလျက်နေသည် ဟုသူကပြောသည်
သငျသညျ asshole သို့မဟုတ်ပြောင်သောဆံပင်, သင် oligophrenic fuck ဆိုတဲ့ fuck ဆိုတဲ့လား
မင်းအသက် ၂ နှစ်ကဘာလဲ၊ မင်းမိဘတွေဟာညီအစ်ကိုတွေဖြစ်နေတယ်။
ငါ့ကို ESO ယူပြီးပြီလား သင်အထူးလူများအတွက်ထိုကျောင်းများသို့သင်သွားနိုင်သည်၊ သင်ကခဲတံကိုယူပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏ drool ကိုကိုင်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်သူတို့ကသင့်ကိုခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့သည်။
လူ့ဥစ္စာကို fuck ဆိုတဲ့။
Sergio García Carrillo ကိုပြန်လည်စာပို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်ကိုလျက်နေသည်။
မင်္ဂလာပါ။ အခြားမှတ်ချက်အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ စာမေးပွဲ ၁၀ ခုမှာ ၁၀ ခုရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အကောင်းဆုံးကျောင်းသားဖြစ်သည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးကိုငါလုပ်နိုင်မလားမသိဘူး။ ကတ်ပြားတွေနဲ့ကစားရုံပဲ၊
* လေ့လာကြည့်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သယ်ဆောင်သွားပြီးစီးဆင်းစေပါ။ * လာပါ။
ငါမနက် ၉ နာရီမှာစလေ့လာတယ်၊ မနက်မှာပဲလေ့ကျင့်လို့ရတယ်၊ အချိန်မရှိဘူး။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းငါနေ့လည်ခင်းအတွက်ဥပမာလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
Nike ကရားသီး (JANN) ဟုသူကပြောသည်
ငါကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ် (materiam superat opus)
Nike yamakhassi (JANN) သို့စာပြန်ရန်
ငါဒီ hidea ကြိုက်တယ်။ ငါ့ကိုအိမ်ထောင်ဖက်တိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်မယ်၊ လျှာကကောင်းတယ်
မင်းဟာ ajjaajj ဘာသာစကားနဲ့ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ hidea နဲ့ငါ့ကိုကူညီနိုင်တယ်၊ ငါမရှင်းဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တယ်။ ဟားဟား
ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းပြီ။ မင်းနဲ့ကောင်းတာပေါ့။ ငါမသိဘူး
ကောင်းမွန်သောကျောင်းသားကဒ်များကိုမထုတ်ယူမီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို fuck ဆိုတဲ့အဘိဓာန်တစ်လုံးဝယ်ပြီး "ဟာသ"၊ "အမြီးအမောက်" သို့မဟုတ် "ဟာသ" အသားတုံးများကိုရှာဖွေပါ။
ငါကြိုးစားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်သည်သင်တန်းတွင်အကောင်းဆုံးကျောင်းသားများအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိပ်ဆုံး ၃ ဦး တွင်ပါဝင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လေ့လာရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါသတင်းအချက်အလက်သိုမဟုတ်အချိန်အများကြီးဖြုန်း, ထိုသို့အမှန်တကယ် ... အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။
Belu ကိုပြန်ပြောပါ ဦး ။
ငါလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားတော့မယ်၊ မင်းငါ့ကို sex000 အများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်တောင်မှနားမလည်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောစာသားဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်လေ့လာနိူင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်စာသားများကိုမပြုပြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းထဲတွင်မထားနိုင်ပါ။ သို့သော်သီချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါက၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ လေ့လာပါဒါပေမယ့်အရာရာကိုမှတ်မိရတာအရမ်းမကောင်းဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကလုပ်ခဲ့တာတွေကိုတောင်မှမသိဘူး
အဖြစ်မှန် - ကျွန်ုပ်၌စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အချို့သောအချက်များကကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ရွှေ Boy ဟုသူကပြောသည်
စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်ဟာဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာဉာဏ်ရည်စွမ်းရည်ပြaနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမပြုမီအချိန်ကကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာ၏ဆိုးကျိုးသာဖြစ်သည်။
သင့်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေသောအရာအားလုံးကိုယခုအချိန်တွင်မေ့လိုက်ပါသင့်ကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ဖြင့်ပြည့်စုံစေသောသင်နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ကောင်းသောအတွေးများရှိပါကကောင်းမွန်သောအတွေးများကသင့်အားအလင်းရောင်ဖြည့်စေမည့်ကောင်းသောအတွေးများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ သငျသညျလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဖြည့်နိုင်သည့်သူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုခုစဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မနှိပ်စက်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏အစွမ်းအစကိုမယုံကြည်ပါကသင်၏စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်ပါ။ မင်းဟာမင်းထင်ထားတာထက်ပိုပြီးစမတ်ကျတယ်။ သူတို့ပြောသမျှကိုမယုံနှင့်သင့်စိတ်ထဲဖြတ်သန်းသွားသောအရာအားလုံးကိုမယုံပါနှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်မှားသောအတွေးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီကြီးမားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သင့်ကိုအခြားဘယ်သူမှမပေးနိုင်သည့်အပြင်သင့်ကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးပါ။
ငါဂန္ထဝင်ဂီတကိုနားဆင်ရန်သို့မဟုတ်စံနမူနာနောက်ခံသို့မဟုတ်တူရိယာနောက်ခံတေးဂီတများဖြင့်အနားယူထားသောတေးဂီတကိုနားထောင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ဂီတသည် alpha state တွင်ဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လည်းရှိသည်။ ငါဂီတကုထုံးလို့ခေါ်တဲ့ချန်နယ်အကြံပြုပါသည် သီချင်းဆိုခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းစသဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ပါ။
Golden Boy သို့ပြန်သွားပါ
အိုင်တီဆိုးရွားမယ်မဟုတ်ပေမယ့်သင်က H ကိုစား
အဘယ်သူသည်ကယူတာလဲတစ်စုံတစ် ဦး က 1529472837 နံပါတ်လိုသည်
သူကအားလုံးကိုထည့်သွင်းသည် fernando မှ reply
အလွန်ရှည်လျား pe တာဝန်ထမ်းဆောင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးပါ၊ ကျွန်တော်ဟာရေငတ်နေတဲ့ရေချိုးခန်းလိုပဲခေါင်းကိုလွဲသွားတယ်။ ချုံပုတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်နေတယ်
မျှော်လင့် pass မှပြန်ကြားရေး
ဟယ်လို!! ဤအကြံပြုချက်များသည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Oppositions ကိုပြင်ဆင်တော့မည်။ သို့သော်မိုဘိုင်းဖုန်းမှသင်၏မျက်လုံးများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း၊ ကောင်းပြီ, ငါလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်နှင့်ယခုငါပဲအချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!!
Academia Bachillerato Madrid အားပြန်ကြားချက်
aleli zarate ဟုသူကပြောသည်
aleli zarate အားပြန်ပြောပါ
ဤအကြံပြုချက်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ သင်၏သမီးကိုနှောင့်နှေးသည်ဟုဆိုသူများအတွက်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏စာလုံးပေါင်းကိုသင်စာသင်ကြားရသူသည်သင်၏စာအရေးအသားဖြစ်သည်။ လူထုံ ... .. နှင့်သင့်အားပြစ်တင်ဝေဖန်သူများအားငါသူတို့အား shit ကိုစားရန်နှင့်ထိုလူစားမျိုးကိုဂရုမစိုက်ရန်ပြောသည်။ သင်သည်အကြံဥာဏ်များကို ဆက်၍ ပေးသည်၊ အကြောင်းမှာသင်သည်သင်၏ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်နှင့်လူများကိုကူညီရန်ကြိုးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့) အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်သင်၏လမ်းကိုသွား ... ။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၁ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ပြောရန်ဂရုမစိုက်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည် !!!
ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပိုမိုမြန်ဆန်သောလေ့လာမှုနည်းစနစ်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်မည်လားကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။
မာရီယာ LS ဟုသူကပြောသည်
Maria LS ကိုပြန်ကြားပါ